ညချစ်သူ | 7:07 PM | သိမှတ်ဖွယ်ရာ Be the first to comment!
ညချစ်သူ | 7:02 PM | သိမှတ်ဖွယ်ရာ Be the first to comment!
ZOLZOL | 1:21 PM | စာအုပ်စင် Be the first to comment!
ညချစ်သူ | 2:28 PM | ဟာသ Be the first to comment!
ညချစ်သူ | 2:28 PM |
ဦးကျေးညိုတစ်ယောက် အိပ်ရာပေါ်မှာ သေငယ်ဇောနဲ့ မြောနေတယ်။
သူ့ဇနီး၊ သားနဲ့ သမီးတွေလည်း သူ့ဘေးမှာ၊ သူရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်ကို စောင့်နေကြတယ်။
သေခါနီးလူမမာက အားတင်းပြီး မေးတယ်... ...
"မိန်းမ... မုန့်ဟင်းခါးဟင်းနံ့လေးရတယ်၊ ဘယ်အိမ်က ချက်တာလဲ ဟင်"
"အေးကွာ... ငါကြိုက်တဲ့ မင်းလက်ရာမုန့်ဟင်းခါးလေးကို နောက်ဆုံးအနေနဲ့ စားသွားချင်တယ်"
"နာရေးလာတဲ့သူတွေကို ကျွေးရင် မလောက်မှာ စိုးလို့"
"ငင်... ဂိ ဂိ ဂိ"
Posted by ညချစ်သူ at 2:28 PM
ZOLZOL | 10:10 AM | ဗဟုသုတ Be the first to comment!
ZOLZOL | 10:10 AM |
Posted by ZOLZOL at 10:10 AM
ZOLZOL | 10:07 AM | သိမှတ်ဖွယ်ရာ Be the first to comment!
ZOLZOL | 10:06 AM | သိမှတ်ဖွယ်ရာ Be the first to comment!
ZOLZOL | 10:06 AM |
ကိုယ့်ဘဝရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အလုပ်အကိုင်ကို ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါ အကောင်းဆုံး စဉ်းစားသလိုပါပဲ၊ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဖူးစာရှင်မျိုးကို ရှာဖွေတဲ့နေရာမှာလဲ ဘယ်လိုလူမျိုးကို လိုချင်တယ်ဆိုတာကို သေချာစဉ်းစားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဖူးစာရှင်ကို စောင့်နေတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်လိုအပ်တဲ့ ကိုယ်လိုလားတောင့်တတဲ့ အရာတွေကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နိုင်ဖို့ အချိန်ယူလိုက်ပါ။ ၁။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်မှာ ဆရာတစ်ဆူဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါ။
Posted by ZOLZOL at 10:06 AM